Ukushisa i-gas yisimo lapho ingane yakho iphefumulele kuyo yonke into eyingozi enobungozi. Ngokuvamile, ukushisa okunjalo kubangelwa i-carbon monoxide (ibuye i-carbon monoxide noma i-CO). Uma kuningi lwamacala amachiza kagesi angagwenywa ngenxa yokuthi aneziphunga ezibukhali, ngakho ngesikhathi sokuphuma ekamelweni eligcwele imithi enobuthi. Kodwa-ke, i-carbon monoxide ayitholi lutho, ngaphezu kwalokho, ayicasuli umzila wokuphefumula, ngokulandelanayo, ayibangeli ukukhwehlela - futhi lokhu kuyingozi enkulu. Ngakho-ke, isihloko se-athikili yethu yanamuhla siwukuthi "i-Carbon monoxide poisoning", futhi kuyo kuyokutshela lokho okuyiyo - ukushiswa kwegesi, ukuyibuka nokuyiqaphela, futhi-ke, yiluphi usizo lokuqala okufanele lube khona uma ingane yakho isetsheziwe ne-carbon monoxide.
Okokuqala, singasho ukuthi uketshezi lwe-carbon monoxide lungenzeka kaningi ngoba iqiniso lokuthi i-carbon monoxide ngokwayo ayiyona into engavamile, ihlale ibunjwa futhi iqoqa lapho izinto eziphethwe yi-carbon zishiswa khona. Okusho ukuthi, sikhuluma ngephepha, izinto zokhuni, mayelana namalahle kanye nesikhumba, izindwangu kanye nenjoloba, kanye nemikhiqizo yamakhemikhali eplastiki nasemakhaya. Lokhu kungukuthi, ingozi yokuqoqwa futhi, ngokufanele, ubuthi be-carbon monoxide lungenzeka kaningi.
Ungayitshela kanjani ukuthi ingane yakho ibuthiwe negesi? Nazi izizathu ezimbalwa eziyisisekelo zokukusiza uqonde lokhu:
1) ingane ibuthakathaka, futhi lokhu kuyabonakala, uzizwa ehlaziyekile, ngezinye izikhathi kukhona ukulahlekelwa ulwazi;
2) ikhanda lomntwana, elinobuthe negesi, elilimaza ubuhlungu obukhethekile, ubuhlungu bokuphuza;
3) ukuphefumula kuba nzima, kukhona ingane engavamile ngaphambili dyspnea;
4) ukuhlola ukushaywa komzimba, uyaqonda ukuthi inhliziyo yengane iyashaya kaningi kunokudinga, futhi isifuba sibhekene nobuhlungu obukhulu;
5) ingane ingahlanza futhi ihlanza.
Ukunakekelwa okuphuthumayo okumele kuhambisane nobuthi nge-carbon monoxide noma yimuphi omunye igesi ngokuyinhloko ukuthi ingane ethintekile idinga ukuqhutshwa ngokushesha ngangokunokwenzeka endaweni lapho umphumela wekhabhoni monoxide umiswa - okungukuthi, emgwaqeni, emoyeni fresh futhi ehlanzekile. Uma, endaweni yokukhonkolo, lokhu akunakwenzeka, bese udala izimo zomoya omusha ukungena egumbini ngefasitela nokuvula iminyango.
Isinyathelo sakho esilandelayo kufanele kube ukutholakala nokungathathi hlangothi kwezinto ezidlula umntwana osongela impilo (noma kunjalo, okwakho, kodwa kancane kancane) i-carbon monoxide. Mhlawumbe kuyoba imoto eye ivuliwe (khona-ke udinga ukuvala ukushisa), noma i-heater gas (okufanele ivalwe okwesikhashana) namanye amadivaysi.
Manje hlola izingubo zengane, kuyinto efiselekayo ukuzama ukuyinciphisa (noma ukususa ngokuphelele, uma isimo sivuma) esifundeni esifubeni nasentanyeni, ukuze umoya-mpilo ungene emaphashini wengane ngokukhululekile.
Uma, uNkulunkulu engavumeli, usizo lwakho luphuzile kancane, futhi isimo esibucayi sesifikile - sidinga ukuthatha izinyathelo eziphuthumayo ngokuphuthumayo - sikhuluma ngokuvuselelwa kwe-cardiopulmonary uma kuboshwa inhliziyo, okuyinto ngezinye izikhathi kuhambisana ne-gas poisoning.
Uma kunjalo uma ulwazi lushiyile ingane, noma kunjalo, ukubeka isandla sakho esifubeni sakho, usuzwa ukushaya kwenhliziyo - bese udinga ukubeka ingane endaweni ehlezi eceleni kwayo, ngenkathi yenza kube lukhuni ngangokunokwenzeka, futhi ingane 'ayiwi' esiswini noma emuva .
Kunenye ye-nuance ebaluleke kakhulu: ngisho noma kubonakala kuwe ukuthi ukushiswa kwegesi kwakuncane kakhulu, futhi kuncane kakhulu, nokuthi ingane imphilile futhi ikhula - akusiyo isizathu sokunganaki ukuvakasha kudokotela. Kunoma yikuphi, uma ubuthi nge-ANY gas, kufanele ngokushesha uthole usizo lwezokwelapha.
Kudingeka futhi ukwazi ukuthi ukushisa i-gas kungenzeki kuphela uma kukhona okuvuthayo - emva kwakho konke, igesi lingakwazi ukuqoqa ngokuhamba kwesikhathi kulawo makamelo angenawo umoya, noma ezitsheni ezivaliwe. Ngakho-ke, uma uthola ingane emgodini noma emthonjeni, ethanini noma itanki, futhi engazi lutho - awukwazi ukungena lapho, ngoba kunengozi enkulu yokuthi uzoba nobuthi ngamabili ahlangene. Futhi kulokhu, njengoba wazi, ulinde usizo, mhlawumbe ngeke kube khona ovela kuye. Kungcono ukubiza ithimba losizo ngokushesha bese ulinda ukufika kwabo.
Yiqiniso, kungenzeka ukuba ubuthi nje kuphela i-carbon monoxide, kodwa-ke, zonke ezinye izinhlobo zegesi, ezimweni eziningi, zinezici eziningana ezikuvumela ukuba ubone ngokushesha ukuthi kukhona khona igesi eningi ekamelweni futhi unqume ukuthi ubuthi buyenzeka. Ngakho-ke, wonke amagesi anephunga - elibukhali futhi alimnandi kakhulu, futhi akwazi ukucasula umonakalo, okwenza kube nezimpawu ezisolisayo ezifana nokuzwa okuvuthayo ekhaleni, amehlo noma umphimbo, ukukhwehlela kuvela, nokuphefumula kuba nzima.
Kungakhathaliseki ukuthi yiliphi igesi ingane elinobuthe, isinyathelo sakho sokuqala kufanele kube ukuyeka ukuxhumana nomuthi oyingozi bese uthatha ingane ethintekile emoyeni ohlanzekile.
Ukuze ugweme izimo ezinjalo zokusongela, imithetho eyisisekelo yokuphepha kufanele ibonwe, njenge:
1) isevisi ejwayelekile kanye nekhwalithi ephezulu yegesi nezinhlelo zokushisa;
2) faka izinkomba zendlu ezibona ukuvuza kwegesi;
3) isitofu segesi - hhayi indlela yokushisa izakhiwo;
4) injini yomsakazo wangaphakathi akufanele ifakwe ekamelweni ngaphandle kokungena umoya, amafasitela, iminyango;
5) ama-grills, izitofu kanye nalawo madivaysi lapho okuthile okushisa ngenxa yomsebenzi (isibonelo, amalahle, utshwala, uphethiloli noma okunye okunye) akufanele kusetshenziswe endaweni yokuhlala, igaraji noma phansi, eduze kwamafasitela avulekile;
6) amakamelo kufanele ahlale avutha umoya.
Ngokwemvelo, ukushiswa yi-gesi kungenzeka hhayi ngenxa yokunganaki kwabazali noma izihlobo (noma omakhelwane - ngokujwayelekile, labo abaseduze futhi bephule imithetho yokuphepha). Njengoba kunikezwe ikhono lamagesi ukuqoqa emakamelweni namathangi angenawo umoya, kungacatshangwa ukuthi ingane ingase ibe ekamelweni elinjalo (umthamo), isibonelo, nganoma iyiphi imidlalo. Noma ngokusuka ekuthandweni kwengane, bayofika endaweni ethile eyingozi. Ngakho-ke, umsebenzi wakho ukuchazela ngokushesha ingane ukuthi kunezindawo ezingafanele imidlalo, futhi lezi yizimayini, imithombo, amagaraji - okungukuthi, izikhala ezifakiwe. Phinda lokhu ngokuphindaphindiwe, ukuze ungabungozi impilo yengane!
Rash ngezifo ezihlukahlukene ezinganeni
Ukukhetha ifuba lomntwana
Ukuhlanzeka ngomlomo ezinganeni
Isoka lami libuka izithombe zobulili ezingcolile futhi lihamba ngemigoqo yokuqhafaza
Angikwazi ukukhulelwa ingane, kufanele ngenzeni?
Izakhiwo zokwelapha ze-yogurt
Ama-counterfeit amafutha, kanjani ukuwagwema?
Banana isinkwa nesinamoni
Isiko lobuhlobo esifundweni phakathi kothisha nabafundi
Ikhekhe "I-Cottage ye-Monastic" nge-cream ehlutshiwe
Emuva esikhathini esidlule: iqoqo lezakhelo eCleau Peau Les Annees Folles 2016
Banquet wedding izitsha: cuisine Russian
Indlela yokufeza kahle isimo
Inguqulo: I-Pugacheva ayisakwazi ukucula ngenxa yokuvakashela i-Chernobyl
Banana-sitrobheli smoothies for kwasekuseni
I-Technique yokwenza massage yezingane
Ukushayela nge-custard "Kish"